Malunga nathi -HANGZHOU LINAN HUASHENG YONKE IMIQATHANGO YOKWENZIWA KWENKQUBO, LTD
IiCosister ezomileyo ezomileyo
I-2cm ye-DIA icinezelwe iTissue Coin Tissue
I-4.5cm DIA icinezelwe ngetawuli
Ezilahlwayo iitawuli zobuqu
Ezilahlwayo Bath Towel
Ezilahlwayo Izinwele ithawula
Iitawuli zobuso ezomileyo
Ukususa iRemover Sula
Ithawula loLuhlu loBuhle
Singumenzi wobugcisa weemveliso zokucoca ezingalukwanga ukusukela ngonyaka ka-2003,
Silishishini eliphantsi kosapho, zonke iintsapho zethu ziyazinikela kumzi mveliso wethu.
Uluhlu lwethu lwemveliso lubanzi, ubukhulu becala sivelisa iitawuli ezixineneyo, ukomisa okomileyo, ukucoca ikhitshi, iitawuli zokuqengqeleka, ukusula izithambiso, ukusula kosana okomileyo, ukusula okusula kwimizi-mveliso, imaski yobuso ecinezelweyo, njl.
Umzi-mveliso wethu uvunyiwe yi-SGS, BV, TUV kunye ne-ISO9001. Sineqela lobuchule lokuhlalutya imveliso, isebe leQC kunye neqela lokuthengisa.
Sinamawaka alishumi eeworkshop ecocekileyo esemgangathweni yamanye amazwe. Zonke iimveliso zenziwe phantsi komasifundisane ococekileyo ococekileyo.
Sineeseti ezili-15 zezixhobo zokucinezela iitawuli ezixineneyo kunye nemask yobuso ecinezelweyo.
Sinemigca emi-5 yokuvelisa iirowuli zokwenza izinto ukwanelisa iimfuno zabathengi bethu, kwaye siphuhlisa izixhobo ezitsha.
Sinezintlu ezi-3 zokuvelisa izinto zokusula ezomileyo ezingxoweni.
Umphathi wethu, ongutata wethu, oqeqeshiweyo kubo bonke oomatshini, ke wonke umatshini kwiworkshop yethu uzilungiselele ngokwakhe ngenkalo eyahlukileyo. Yenza imveliso yethu ibe ntle ngakumbi kwaye ibe namandla emveliso ephezulu.
Ukuza kuthi ga ngoku, phantse bonke abathengi ngamaqabane ethu eshishini ixesha elide. Siseka ubudlelwane beshishini ngokusekwe kwixabiso lokhuphiswano, umgangatho olungileyo, ixesha elifutshane lokuhambisa kunye nenkonzo elungileyo.
Ndiyathemba ukuba nani niza kuba ngamaqabane ethu!
Siza kukubonelela ngemveliso kunye nenkonzo.
Sinoqeqesho lweqela lokuthengisa rhoqo ukuze siziphucule. Ayisiyo kuphela unxibelelwano nabathengi, kodwa nenkonzo kubathengi bethu.
Sijonge ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kubathengi bethu, sincede abathengi bethu basombulule iingxaki ngexesha lonxibelelwano lokubuza.
Wonke umthengi okanye umthengi onokubakho, kufuneka sibaphathe kakuhle. Nokuba bazokubeka iodolo kuthi okanye hayi, sigcina isimo sethu esihle kubo de bafumane ulwazi olwaneleyo lweemveliso zethu okanye umzi-mveliso wethu.
Sinikezela iisampulu kubathengi, ukubonelela ngonxibelelwano olufanelekileyo lwesiNgesi, ukubonelela ngenkonzo ngexesha.
Ngoqeqesho nonxibelelwano nabanye, siyayiqonda ingxaki yethu yangoku kwaye sizisombulule iingxaki ngexesha ukuze senze inkqubela phambili.
Ngokuthetha nabanye, sifumana ulwazi ngakumbi kwihlabathi liphela. Sabelana ngamava ethu kwaye sifunde omnye komnye.
Olu qeqesho loqeqesho alusincedi kuphela ukuphucula izakhono zokusebenza, kodwa kunye nomoya wokwabelana nabanye, ukonwaba, uxinzelelo okanye usizi.
Emva koqeqesho ngalunye, siyazi ngakumbi ngendlela yokunxibelelana nabathengi, siyazi imfuno yabo kwaye sifikelele kwintsebenziswano eyonelisayo.
Ukutyelela abathengi eFrance
Umboniso wase-Dubai ngonyaka we-2016
Umboniso wase-Dubai ngonyaka we-2017
HONGKONG Izipho Exhibition ngo-2016 ngonyaka
Umthengi otyeleleyo eYurophu ngonyaka ka-2017
Japan Exhibition e Osaka ngo-2015 ngonyaka
Umboniso wePoland eWarsaw ngonyaka we-2016
ICanton Fair ngonyaka wama-2015
IHANGZHOU LINAN HUASHENG YONKE IMIQATHANGO YOKWENZIWA KWENKQUBO, LTD